एकजातीय सत्ता बचाउन बाहुनवादी बौद्धिकहरु टुप्पी कसेर लागेकाछन् !
द्वन्द्वबाट नै समाज रूपान्तर हुने गर्दछ । यो द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक नियम हो । तर, नेपालको वर्तमान द्वन्द्व वैज्ञानिक द्वन्द्ववादमाभन्दा पनि साम्प्रदायिक द्वन्द्वतिर बाहुनवादी बौद्धिक जमातले जबरजस्ती धकेलिरहेका छन् । जातीय मुक्तिको प्रस्तावनामा किन बाहुनवादी बौद्धिक जमात साम्प्रदायिक र सङ्कीर्ण मनोविज्ञानको ढाटमा अल्झिएका हुन्, यो बुझ्न बाहुनवाद र बाहुनवादी मनोविज्ञान र संस्कृतिलाई बुझ्न जरुरी छ ।
Last Updated on Wednesday, 29 June 2011 00:48
Last Updated on Friday, 10 June 2011 08:30
Last Updated on Monday, 23 May 2011 06:18
'को थिए मास्टर मित्रसेन, उनलाई किन सम्झने ?’ – त्रिलोकसिंह थापा मगर
काठमाण्डौं ७ जेठ २०६८
प्रख्यात संगीतकार, गीतकार तथा साहित्यकार मास्टर मित्रसेन थापा सिङजाली मगरको सम्झनामा गत ७ जेठ २०६८ मा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाण्डौंमा आयोजना गरियो । मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित “मास्टर मित्रसेन तथा नेपाली लोक संस्कृति” विषयक उक्त अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव लोक बहादुर थापा मगर थिए । उनले नेपाली लोक भाकामा मास्टर मित्रसेनले गाएका गीतहरु अझ पनि लोकप्रिय रहेको बताए ।
नेपाली लोकगीत तथा जातिगत उत्थानका लागि मित्रसेनको योगदान ज्यादै सराहनिय छ । सो अवसरमा अतिथि वक्ताको रुपमा बोल्दै पूर्व राजदुत डा. मोहन प्रसाद लोहनीले मास्टर मित्रसेनको बहुमुखी प्रतिभा तथा योगदान बारे चर्चा गरे । प्रख्यात साहित्यकार तथा फिल्मकर्मी प्रकाश सायमीले भने– ‘नेपाल र नेपालीका प्रिय गायक मित्रसेन थापामगरले गीतमा आधुनिक चेतना र रोमान्सेली पक्षलाई प्रधानता दिएको पाइन्छ ।’
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको दोश्रो सदनमा विष्णु कुमार सिङजाली मगरले “मगर समुदायको लोक संस्कृतिको अवस्था र चुनौती” तथा भीम मगरले “लोक गीतको क्षेत्रमा मास्टर मित्रसेनको योगदान” विषयमा आ–आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सो कार्यपत्र माथि कार्यक्रमका सहभागि तथा अतिथिहरुले प्रश्न, प्रतिप्रश्न तथा मन्तव्यहरु ब्यक्त गरेका थिए ।
अतिथिहरुमा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिका पूर्व अध्यक्ष क्या. यम बहादुर बुडाथोकी, नेपाल बौद्ध समाजका अध्यक्ष क्या. देब बहादुर राना, अठ्ठार मगरात प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष बमकुमारी बुडा मगर, आदिकवि सिङजाली प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष संजोग लाफा मगर तथा अन्य बुद्धिजिवीहरु थिए । कार्यक्रमको अन्तमा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष झक बहादुर थापाले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समिक्षा गरेकाथिए । उनले यस प्रकारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिए । स्रोत व्यक्तिको रुपमा गैर मगर बुद्धिजिवीहरुको सहभागिता पनि थियो ।
मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानका महा–सचिव गौ बहादुर आलेको स्वागत र कार्यक्रम संचालन विन्दा कुमारी मगरले गरेकाथिए । व्यवस्थापन मुना थापाबाट भएको थियो । कार्यक्रममा मास्टर मित्रसेनका गीतरु प्नि प्रस्तुत गरिएका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष त्रिलोकसिंह थापा मगरबाट सम्पूर्ण सहभागी तथा सहयोगीहरुलाई हर्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरिएको थियो ।
को हुन् मास्टर मित्रसेन
मास्टर मित्रसेन थापा सिंजाली मगर भारतको हिमान्चल प्रदेश जिल्ला कागडा, भाग्सु धर्मशाला तोतारानी गाँउमा २९ डिसेम्बर १८९५मा जन्मनु भएको थियो । उहाँको बाल्यकाल जीवन तथा शिक्षा भाग्सु धर्मशालामा भएको थियो । पुर्खाहरु सैनिक सेवामा भएकोले उहाँ पनि प्रथम गोर्खा राइफल्स सिगनलमा सन् १९१२मा भर्ना हुनुभयो । प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सन १९२०मा सैनिक जीवनबाट अवकास लिनुभयो । त्यस पछि नेपाली गीत संगीतको साधना, साहित्य सिर्जना नाटक तथा कथा लेखन, अभिनय, समाज सुधारमा आफ्नो शेष जीवन सम्र्पित गर्नु भयो । मास्टर मित्रसेनले सन् १९३६ देखि दर्जनौं गीत रचना, गायन, नाटक मंचन, कथा लेखन अनुवादको काम गर्नु भयो । सन् १९३६मा ग्रामाफोनमा रेकर्डमा झ्याउरे गीत रेकर्ड गर्ने प्रथम संगितकार मास्टर मित्रसेन नै हुन् । जीवन पर्यन्त नेपाली पोशाक दौरा सुरुवाल र नेपाली विर्के टोपी पहिरिएर गोर्खाली जातीय गीत सिर्जना गर्ने मास्टर मित्रसेनको बुहुमुखि योगदान बारेमा डा. खगेन शर्मा तथा डा. राजेन्द्रले विद्यावारिधी (पी.एच.डी.) गर्नु भएको छ । नेपाल तथा भारत सरकारले उहाँको नाउँमा हुलाक टिकट समेत प्रकाशन गरेको छ । उहाँको योगदानबारेधेरै लेखहरु प्रकाशित भइ आएको छ
। मास्टर मित्रसेन
ग्रामाफोन रेकर्ड गरिएका उहाँका लोकप्रिय झ्याउरे गीतका बोलहरु यस प्रकार छन् । “मलाई खुत्रुकै पा¥यो जेठान तिम्रो बहिनीले”, “धानको वाला झुल्यो हजुर देशै रमाइलो”, “लाहुरेको रेलीमाई फेशनै राम्रो”, “अब त जाऊँ कान्छी घर बाटो छ उकाली ओराली”,“स्वारानी नजाउ छाडी विदेश”, “किन गर्छौ तानतानी दुई दिनको छ जिन्दगी”, “चुई चुई चुइकिने जुत्ता”, छड्के टोपी ढल्काई ढल्काई खुकुरी चम्काई”। यीनका गीतहरुमा राष्ट्रियता, सरलता र झर्रा नेपाली शब्द चयन भएको हुनाले काली भत्य पन्तले मित्रसेनलाई राष्ट्रिय गायकको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । “हितको कुरा”, “गहिरो खोग”, “मित्रको डायरी”, “उन्नतिको साँचो”, “सुशीलता” आदि उहाँको निवन्ध संग्रहहरु हुन् । “बुद्ध वाणी” “महाभारत”, “गीतास्तर”, “परशुराम लक्ष्मण संवाद”, “सत्यनारायण” आदि धार्मिक रचनाहरु हुन् । हास्य व्यंग र गजल कद्धानाली समेतका रचनाहरु हुन् । मास्टर मित्रसेन थापा सिंजाली मगर वास्तवमा बहुमुखि प्रतिभाका व्यक्तित्व थिए । उहाँले गीत संगीत, साहित्य, समाजसेवा र दार्शनिक क्षेत्रमा समेत आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९४६ अप्रिल ६ तारीखमा उहाँले यो संसार छोडेर जानु भयो । तै पनि आजसम्म उहाँको साँगितिक, साहित्यिक योगदानबारे मास्टर मित्र स्मृति प्रतिष्ठानले युवा पिढीमा प्रचार प्रसार गर्दै आएको छ । युवा पिढीमा केहि गरौं भन्ने भावनाको जागरण होस भन्ने प्रेरणा प्राप्त होस मास्टर मित्रसेन स्मृति प्रतिष्ठानको यहि नै उद्देश्य हो ।
Last Updated on Sunday, 30 December 2012 00:44
यस पालिको जनगणनामा पनि छुट्नेभए प्रवासी नेपालीहरु
देशको अर्थतन्त्रमा झन्डै आधा हिस्सा नेपाल वाहिर रहेका नेपालीहरुको आम्दानीमै निर्भर रहेपनि सरकारले जनगणना जस्तो राष्ट्रिय पर्वमा नेपाल वाहिर रहेका नेपालीको महत्व र योगदानलाई भुल्न खोजिरहेको छ ।
जनमुक्तिको २० बर्ष : बिचारले धनी कार्यदिशामा कगांल
संविधानसभा हैन दलहरु हुन् फेल भएका
यो जनगणनामा मगरले किन लेखाउने बुद्ध धर्म
पत्रकारले मात्र चल्दैन मिडिया